Willian iyo Matic oo ay dhex martay dhacdo qosol leh kulankii galabta (MUUQAAL) – Gool FM
Willian iyo Matic oo ay dhex martay dhacdo qosol leh kulankii galabta (MUUQAAL)
Liibaan Fantastic February 25, 2018
(Manchester) 25 Feb 2018 Laacibka weerarka uga ciyaara Chelsea ee Willian ayaa sameeyay galabta dhacdo qosol leh kadib markii uu isku dayay inuu aqristo fariin tababare Mourinho uu u soo qoray Matic.
Tababare Jose Mourinho ayaa badal ku soo galiyay Eric Bailly, wuxuuna u soo dhiibay warqad uu ku soo qoray sida uu ka rabo in shaxda ay isku badasho maadama kooxdiisa laga doonayay inay difaacato hogaanka ciyaarta.
Eric Bailly ayaa warqadii u keenay Matic, balse Willian oo ka ag dhawaa ayaa isku dayay inuu qisho waxa ku qoran warqada iyo taatikada ay isticmaalayso United daqiiqadaha ka harsanaa ciyaarta.
Bailly comes on with a note and gives it to Matic, Willian tries to sneak a look pic.twitter.com/phfcKqEoqR
Matic ayaa arkay Willian oo doonaya inuu kor ka qisho waxa ku qoran warqada, wuxuuna durba bilaabay inuu ka cararo laacibka reer Brazil kaas oo soo buursaday, ugu danbayntii Willian ayaa ku guul daraystay inuu arko fariintii Mourinho uu u soo qoray laacibkiisa.
Waxaa xusid mudan in Manchester United ay 2-1 uga adkaatay kooxda Chelsea.
Barcelona iyo Chelsea oo isku garbinaya saxiixa Yann Karamoh
GOOGOOSKA: AS Roma vs AC Milan 0-2 (Milan oo Roma laba ku rukhuustay)